WTC Final : भारतले जित्छ कि न्यूजिल्याण्डले? यस्तो भन्छन् ८ चर्चित क्रिकेटर
काठमाडौं : वर्ल्ड टेष्ट च्याम्पियनशिपको फाइनल भारत र न्यूजिल्याण्डबीच जून १८ देखि जून २२ सम्म हुँदैछ । ८ क्रिकेट पण्डितहरूले यसको बारेमा भविष्यवाणी गरेका छन् ।
आईसीसी टेष्ट वरियतामा भारत शीर्ष र न्यूजिल्याण्ड दोस्रो स्थानमा छन्। यसैबीच, आकाश चोपडालगायत ५ क्रिकेट पण्डितहरूले केन विलियम्सनको टिमले भारतलाई हराएर च्याम्पियनशिपको फाइनल जित्ने बताएका छन्।
यद्यपि, न्यूजिल्याण्डका चर्चित क्रिकेटर सर रिचार्ड हड्लीले दुवै टोलीहरू बलियो रहेकोले एउटा टिम छनोट गर्नु गलत हुने बताए । भारतीय टिम ३ जूनमा इंग्ल्यान्ड पुगेको थियो । ६ जूनदेखि भारतीय खेलाडीलाई समूहमा प्रशिक्षण गर्न अनुमति दिइएको छ।
न्यूजिल्याण्डको टिम मे १७ देखि इंग्ल्याण्डमा छ । लगभग १२ दिनको प्रशिक्षणपछि टिमले इंग्ल्याण्डविरुद्ध एउटा टेष्ट पनि खेलेको छ । किवी टोलीले दोस्रो टेष्ट जून १० देखि इंग्ल्याण्डविरुद्ध नै खेल्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि न्यूजिल्यान्ड अझ राम्रो खेल अभ्यासको कारण नेतृत्वमा हुनेछ । विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि कसले पोल्टामा जान्छ त? अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। ८ क्रिकेट पण्डितका राय पढौं :
माइकल वान : इंग्ल्यान्ड टिमका पूर्वकप्तान वानले न्यूजिल्याण्ड टिमले आईसीसी डब्ल्यूटीसीको ट्रफी जित्न सक्ने बताएका छन् ।
स्पार्क स्पोर्टलाई दिएको बयानमा उनले भने, ‘अंग्रेजी अवस्था र ड्यूक बल ट्रेन्ट बोल्ट र टिम साउथी जस्ता बलरहरूको लागि उपयोगी साबित हुनेछ । यससँगै भारतीय टीम धेरै व्यस्त तालिका पछि इंग्ल्यान्ड पुगेको छ। एक हप्ता टीमले अभ्यास बिना खेल खेल्नुपर्नेछ । इंग्ल्यान्डविरुद्ध किवी टीमको अभ्यासले उनीहरूलाई फाइदा पुग्न सक्छ ।’
वीभीएस लक्ष्मण : भारतीय टीमले ट्रफी जित्न सक्छ
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीभीएस लक्ष्मणले भारतीय टीमले आईसीसी डब्ल्यूटीसीको ट्रफी जित्न सक्ने बताएका छन्।
उनले स्पोर्ट्स स्टारलाई भने, ‘दुबै टिम राम्रो छ। तर, भारतमा बढी अवसरहरू छन्। विगतका केही वर्षमा भारतले विपरीत अवस्थामा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। तिनीहरूको मनोबल अझै उच्च हुनेछ।’
ब्रेट ली : न्यूजिल्यान्डको लागि उपयोगी
पूर्व अष्ट्रेलियाका तिब्र गतिका बलर ब्रेट लीले न्यूजिल्यान्डले उपाधि हात पार्न सक्ने बताएका छन्। उनले खेल रोचक हुने बताए।
‘किवी टीममा राम्रो बलरहरूको उपस्थितिले उनीहरूलाई फाइदा दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘दुबै टोली ब्याटिङमा समान छन्।’
प्याट कमिन्स : न्यूजिल्यान्ड टीम जीत हात पार्न सक्छ
अष्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर प्याट कमिन्सले न्यूजिल्यान्डले फाइनल जित्ने बताएका छन्।
उनले आफ्नो युट्यूब च्यानलमा भने, ‘भारत र न्यूजिल्याण्डबीच एक ठूलो खेल हुनेछ। जहाँसम्म मैले सुनेको इंग्ल्यान्डमा ठूलो वर्षा भएको छ र त्यहाँ बादल छाँटकाँट हुने स्थिति हुनेछ। यस्तो अवस्थामा काइल जेमसन, बाउल्ट र दक्षिणले भारतीय ब्याट्सम्यानलाई समस्या सिर्जना गर्न सक्दछन्।’
ब्रेण्डन म्याक्लम : न्यूजिल्याण्ड टीमलाई फाइदा
न्यूजिल्यान्डका पूर्वकप्तान ब्रेण्डन म्याक्लमले विलियमसनको टिमसँग फाइनल जित्ने ६० प्रतिशत सम्भावना रहेको बताए।
उनले इंडिया टुडेलाई भने, ‘न्यूजिल्यान्डसँग फाइनल हुनुअघि इंग्ल्यान्डसँग खेल्दा अभ्यास हुनेछ। न्यूजिल्याण्डले भारतलाई जसरी आदर गर्दछ, म पनि भारतलाई सम्मान गर्छु। मलाई थाहा छ उनीहरू न्युजिल्यान्डलाई कडा चुनौती पेश गर्नेछन्।’
मोन्टी पनेसार : भारतीय टीमलाई फाइदा
पूर्व इंग्ल्यान्डका स्पिनर मोन्टी पनेसार भारतले आइसीसी डब्ल्यूटीसी फाइनल जित्न सक्ने बताए।
‘साउथ्याम्प्टन पिचले स्पिनरहरूलाई फर्काउन सक्छ र खेल अगाडि बढ्दै जाँदा रविचन्द्रन अश्विन र रविन्द्र जडेजा ठूलो खतरामा पर्न सक्छन्। न्यूजिल्याण्डसँग क्वालिटी स्पिनर छैन र यसको कारण, टीम इंडियासँग ठूलो अवसर छ,’ उनले भने।
आकाश चोपडा : न्यूजिल्याण्डको टीमले जित्न सक्छ
पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपडाले न्यूजिल्याण्डको टीमले जित्न सक्ने बताए। उनले भने। ‘विराटको टोलीसँग विदेशी भूमिमा न्यूजिल्याण्डको राम्रो रेकर्ड छैन। २०२० मा भारतीय टीमले ओभरकास्ट अवस्थामा न्यूजिल्यान्डमा पराजयको सामना गर्नुपर्याे।’
आकाशले थप्दै भने, ‘हामीले उनलाई कहिले पनि ओभरकास्ट अवस्थामा पिटेनौं। अष्ट्रेलियामा जितेर आएको टोलीले न्यूजिल्यान्डमा संघर्ष गर्नुपर्याे। जबकि हाम्रो पूरै टीम न्यूजिल्याण्डमा खेलिरहेको थियो। साउथेम्प्टनको पनि ओभरक्स्ट परिस्थिति हुन सक्छ र भारत समस्यामा पर्नेछ। म पूर्ण रूपमा भारतलाई समावेश गर्दैछु। तर नतिजा ५५–४५ ले न्यूजिल्यान्डको पक्षमा छ।
सर रिचर्ड हेड्ली : एउटा छनौट गर्न गाह्रो छ
न्यूजिल्यान्डका महान क्रिकेटर सर रिचर्ड हेड्लीले कुनै एक टीमको पक्ष लिन अस्वीकार गरे।
‘दुबै टिम कडा र राम्रो प्रदर्शन गर्दै छन्। दुबै केहि उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान छन्। त्यसैले यो म्याच हेर्न रमाईलो हुन गइरहेको छ। यस चरणमा म कुनै निर्णयमा पुग्न सक्दिन,’ उनले भने।
आकाश चोपडाटेष्ट च्याम्पियनशिपब्रेट लीब्रेण्डन म्याक्लमसर रिचर्ड हेड्ली